Xafladii maanta Danwadaag ee magaalada Borås – danwadaagforening.se
Home 2015 September 26 Xafladii maanta Danwadaag ee magaalada Borås
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey oo maanta ay tariikhdu ahayd 26/9-2015 ka dhacday magaalada Borås gaar ahaan xaafada Norrby. Xafladaas waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda Danwadaag Borås, xafladana waxaa kaso qeybgaley dhamaan xubnaha jaaliyada, caruurtooda iyo marti sharaf farabadan oo isugu jira ajnabi iyo walaalo somaliyeed, waxaa xusid mudan oo kaso qeybgaley masuul sare oo ka socotey hayada aan wada-shaqeyno ee STUDIEFÖRBUNDET taas fiican usoo dhoweysey dadaalka jaaliyadda ay wado waxayna balanqaadey in ay ula shaqeyn doonto si hagar la’aan ah.
Xaflada waxaa shir gudoominayey Xoghayaha jaaliyada ugu horeyntii waxaa AAYADO QUR’AN AH ku furey Sheekh Adan Ali, intaas kadibna waxaa lagu soo dhoweeyey Guddoomiyaha jaaliyadda waxaana si qoto dheer uu uga hadlay xaalada iyo horumarka jaaliyadda meesha ay mareyso, waxa u qabsoomey iyo waxa ay hiigsaneyso mustaqbalka fog intuba.
Intaas kadibna waxaa laga doodey qodobo loo balansana in looga dooda xafada kadib qodobadiina waxay ku dhamaadeen si heer saro ah oo is afgarad ah.
hoos kadaawo sawirada xafada………….